အီဒီယမ် ၅ - The Best English4You
Back စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယမ်အသုံးနှုန်းများ
_ ဗွီအိုအေ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာမှ ဆရာမ ဒေါ်လှလှသန်း၏ ပို့ချချက်သင်ခန်းစာ
ဒီ အသုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး George Crows ပေးတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
wife isaback seat driver. I told her to stop this habit as it makes me very angry. She is always telling me what to do even who to be friends with. ကျနော်အမျိုးသမီးက မလိုအပ်ပဲ ဆရာသိပ်လုပ်တယ်။ ကျနော်လည်း သိပ်ကိုစိတ်ဆိုးတော့ ဒီအကျင့်ကို ဖျောက်ဖို့ သူကိုပြောတယ်။ ကျနော်ကို ဘာလုပ် ဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီတော့ အမြဲပြောတယ်။ ဘယ်သူနဲ့ မိတ်ဆွေပေါင်း သင်းရမယ်ဆိုတာတောင် ပါသေးတယ်။
ဥပမာ Snakes and Ladders ဆိုတဲ့ အန်စာတုံးကို ခွက်ထဲထည့်လှုပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ဂဏန်းနံပါတ်ကိုယူပြီး မိမိရဲ့  ကော်ပြားအဝိုင်းကလေးကို ရွှေ့ ပြီးကစားရတဲ့ မြွေနဲ့လှေကား ကားချပ်ကစားနည်းမှ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိမိလှုပ်ချ လိုက်တဲ့ အန်စာတုံးရဲ့  ဂဏန်းနံပါတ်ကိုယူပြီးတော့ ကားချပ်ပေါ်မှာ မိမိရဲ့ 
John အပြောအရတော့ ကျနော်တို့ တစ်ကနေ ပြန်စကြရတော့မယ်။ ကျနော်တို့ တင်သွင်းထားတဲ့ အဆိုပြုလွှာကို ကော်မတီက သဘောမတူဘူး။ အသစ်ပြန်တင်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောတယ်။ နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းမှာ back to the drawing board ဖြစ်ပါတယ်။ Back to = ပြန်သွားသည်။ Drawing = ပုံဆွဲသည်။ Board = ပျဉ်ချပ်ပြား တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့
ပုံဆွဲတဲ့ ပျဉ်ချပ်ပြားဆီကို ပြန်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာမှာ ရေးဆွဲတဲ့ဆီကို ပြန်သွားရမယ်ဆိုရင် မိမိဆွဲထားတာ မဟန်မမှန်လို့ သုံးမရလို့ ဒီဇိုင်းအသစ်ကို
လုံးဝပြန်ဆွဲရမယ် သဘောကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း နေ့စဉ်ဘဝမှာ တစ်ကနေပြန်စရမယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလို back to the drawing board က အားလုံးကို အစအဆုံး ပြန်လုပ်ရတယ့် အခြေအနေမှာ ဒီအသုံးအနှုန်းကို သုံးနှုန်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အင်တာနက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုစခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ကာလတခုအတွင်းမှာ အမြတ်အစွန်းမရလို့ အားလုံးပြန်လည် စီမံလုပ်ကိုင်ရမဲ့